Rakipeo NACLA-GV, Amerika Latina: Ny Dian’ny Mpifindra Monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 17:44 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Aogositra 2013 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Kongresy Amerikana Avaratra any Amerika Latina (NACLA) ity lahatsoratra ity ary ampahany tao amin'ny andian-dahatsoratra Amerika Latina: Ny Dian'ny Mpifindra Monina,. Araho hatrany ny vaovao anarahana lahatsoratra bebe kokoa sy ny rakipeo.
Midika inona ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny mpifindra monina ny fanovana ny lalànan'ny fifindra-monina Amerikana? Miresaka amin'ny mpiara-miasa ato amin'ny Global Voices Robert Valencia sy ilay mpanoratra ao amin'y NACLA Joseph Nevins izahay. Nandany volavolandalàna mikasika ny fifindra-monina tamin'ny vato miisa 67 noho ny 27 ny Antenimieran-doholona Amerikana tamin'ny 24 Jona. Mikatsaka ny fananganana ny tondrozotra amin'ny zom-pirenena sy ny fanamafisana ny fiarovana ny sisintany ny volavolandalàna. Hampiakatra ny saran'ny visa ho an'ny mpiasa matihanina ihany koa ny volavolandalàna ary mikasa hametraka fandaharana visa vaovao ho an'ny mpiasa tsy dia manana traikefa .
Famoriam-bahoaka tamin'ny taona 2010 nandritra ny Fanovana ny Lalànan'ny Fifindra-monina tao Washington DC. Sary: Anuska Sampedro tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Raha maro no nankalaza ny lalàna ireo mpomba ny fifindra-monina, ny sasany kosa miahiahy fa hampihena ny fidiram-bola ny fanamafisana ny fiarovana sisintany . Anisan'ny ao anatin'ny volavolandalànan'ny Antenimieran-doholona ny fampidirana mpiasa vaoavao miisa 19.000 hanao ny asa Fanaraha-maso ny Sisintany, fananganana ny rindrina fanampiny mirefy 1.120 kilaometatra , ary ny fampiasam-bola an'arivony tapitrisa dolara amin'ny fanaraha-maso ny teknolojia.
Miankina amin'ny Antenimiera Amerikana ny zavatra mety hitranga momba ny fanavaozana ny fifindra-monina amin'izao fotoana izao. Fa ny tena mety hitranga anefa dia ny fandanian'ny antenimiera ny volavolan-dalàna samy hafa izay hiafara any amin'ny Biraon'ny komitin'ny Loholona. Antenaina mba hanery ny kongresy ireo vondrona mpanohitra rehefa miverina avy any amin'ny fakan-drivotra amin'ny volana Aogositra izy ireo.